Dr. Mararaa Guddinaa Mirga Wabiin Gad Dhiifamuu Hin Arganne – OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATA
WASHINGTON, DC — Dura taa’aan Kongresii Federaalawaa oromoo Dr. Mararaa Guddninaa har’a mana murtii Federaalaa dhaddacha Araadaatti dhiyaatanii jiran. Dhimma Dr. Mararaa Guddinaa akka qoratuuf poolisiin yeroo sadaffaaf har’as qorannaa itti dabalaa akka geggeessuuf goyyoonni 28 kennameefii jira. Abukaatoleen isaanii mirgi wabii akka eegamuuf gaaffii isaan dhiyeessan manni murtii fudhatama dhabsiisee jira. Abukaatoo Dr. Mararaa keessaa tokko kan ta’an obbo Wandimmuu Ibsaa ibsanii jiru.
Poolisiin Dr. Mararaa irratti qorannaa geggeessu mana murtiif akka himetti herrega isaanii baankii keessa maallaqa hedduu dhaaba shorokeessotaa irraa ergame akkasumas galmeelee hedduu dhaabolii akkasii biraa ergametu jira. Afaan Oromoon waan jiruuf gara Afaan Amaaraatti hamman hiikutti akkasumas ragaa ka biroo hangan yeroo itti dabalaan barbaada jechuun mana murtii gaafate.
Manni murtichaas himannaa kana dhaggeeffachuuf akka lakkoobsa Itiyoopiyaa Guraandhala 16 bara 2009tti beellama ka biroo kennee jira.